Dhibaatooyinka Laga Dhaxalo Qofka Bani Aadamka Ah Oo Laga Faaii'daysto Markuu Baahanyahay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Baahidu waa wax ilaahay ku beero bani aadamka taas oo kala duwan, iyadoo qof walba uu baahi qabo.
Qofka bani aadamka ah markuu baahanayahay ma noqonayso oo kaliya inuu cunto u baahanayahay ama baahiya aasaasiga ee noloshu ubaahanatahay, waxay noqanaysaa qof baa u baahan inuu cadaalada helo mudana u samraayey, qof baa ubaahan inuu helo guur xalaal ah , qof baa u baahan inuu hello shaqo si uu ugu anfaco naftiisa iyo ta qoyskiisa, qof baa u baahan inuu helo mushahar u dhiganta shaqada uu hayao.
Farriintan waxaan udirayaa Madaxda Dawladda, Maxkamadaha, Saraakiisha askarta, Shirkaddaha waaweyn, madaxda shirkaddaha waaweyn, iskuulada gaarka loo leeyahay iyo cid kastoo maamusha cid ka dhaqaale iyo darajo hoosaysa.
1: waxaad arkaysaa shaqaale dawladeed oo shaqaynaya ugu yaraan Sideed sacadood, isla markaana aan maalin maqnaanayn haddii uu maqanaadana waxaa laga goynayaa ganaax mushaharkiisa halka qaar isla xafiiskaas ka tirsan aanay soo shaqo galayn bisha oo dhan, isla markaana uu imanyo maalinta lacagta la qaadanayo oo kaliya, taas eedeeda, dhibaatadeeda iyo dulmiga qofkaas laga galay waxaa qaadaya Madaxda goobtaad ha ugu horeeyo Madax shaqaalaha.
Ugu danbayntii mudane/ marwo hadii aad isku argto dhibaatooyinkan bal hadda dib isku fiiri bal nolshaada cida kugu xeeran inay cidina kaa tirsanyso wax dulmi ah.